China Vibrator miaraka amina silipo malemilemy sy lohan'ny filalaovana aina toy ny fanandramana tena firaisana ara-nofo sy orinasa VV455 | ANDREFANA
Vibrator miaraka amina silipo malemilemy ary lohan'ny filahiana toy ny tena fiainana VV455
Vibrator miaraka amina silipo malemilemy ary lohan'ny filahiana toy ny tena fiainana traikefa
Fitaovana: Silicone Liquid + ABS
Size: 34 × 198 × 34 × mm
Function: 10-mode vibration miaraka amin'ny fanafanana
• Silipo marefo toy ny hoditra miaraka amina endrika feno endrika tsy mahazaka rano 100%.
• Vatan-tsoroka mba hanentanana tsara kokoa.
• 10-mode vibration miaraka amin'ny mari-pana 42 ° C tsy tapaka ho an'ny traikefa ahazoana aina.
• Fihetsiketsehana maoderina ho an'ny fahafinaretana bebe kokoa.
Teo aloha: Vibrator miaraka amin'ny fanamainana VV171A
Manaraka: Stimulator clitoris rechargeable maoderina ZK003C